Fiatoan'ny fitaterana :: Fianakaviana maromaro tavela eny amin’ny fiantsonana Fasan’ny Karana • AoRaha
Fiatoan’ny fitaterana Fianakaviana maromaro tavela eny amin’ny fiantsonana Fasan’ny Karana
Fianakaviana maromaro, ahitana olona an-jatony no samy tavela etsy amin’ny Toby fiantsonana Fasan’ny Karana, Anosizato. Avy any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy toa an’ Ampanihy, Isoanala Betroka izy ireo no nikasa niainga hihazo an’ Ambanja mba hikarama. Tsy afaka nanohy ny diany hianavaratra izy ireo noho ny fiatoan’ny fitaterana rehetra mampitohy an’Antananarivo sy ny amin’ny faritra.
“Tamin’ny alakamisy 19 marsa izahay no niala tany aminay tsirairay avy. Tonga teto an-drenivohitra tamin’ny zoma hariva. Tokony ho efa niainga tamin’ny alahady saingy tsy nahazo fiara intsony”, hoy i Tombosoa, tovolahy avy any Ampanihy isan’ireo tavela etsy amin’ny Fasan’ny Karana.
Tojo fahasahiranana ireto olona ireto eo am-piandrasana ny fanohizana ny diany satria na ny trano ipetrahany aza tsy misy. Ireo trano natokan’ny koperativa handraisana olona no onenan’izy ireo. “Manomboka lany vatsy izahay. Tsy misy vola ividianana sakafo fa lany ny tahiry kely. Tsy heverina hahatody ny 15 andro fihibohana izany”, hoy kosa i Ivanah, renim-pianakaviana iray hafa.
Eo amin’ny Toby fiantsonana no andanian’izy ireo ny tontolo androny. Ahitana zaza amam-behivavy sy bevohoka ry zareo. Mikatona kosa ny toby fiantsonana eny an-toerana ary tsy ahitana fiara mivezivezy. Ireo mpampanofa fiara no voalaza fa niainga farany, omaly maraina
Voina teny Ankatso II Hotohoton’ny afo ny tranon’ ny mpianatra
Famokarana fanafody Hisokatra, amin’ity herinandro ity, ny Pharmalagasy
Fanjifana :: Manjavona ny vary gasy eny an-tsena
Fiparitahan’ny valanaretina :: Tafakatra sivy ambin’ny folo ny olona voan’ny “Coronavirus”